सरकार र आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीच आज वार्ता हुँदै
सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीच आज वार्ता हुँदै छ । अपराह्न चार बजेपछि वार्ता गर्ने तयारी छ ।
डा. केसीको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले आज सरकारी टोलीसँग वार्ता हुने बताए । केसीले भने, ‘हामी तयारी अवस्थामा छौं । सरकारले जति बजे, जहाँ बोलाउँछ, हामी त्यहीँ जान्छौं ।’
चेन्‍नइ सुपर किङ्स १० रनले पराजित